	Somaliland waxa loo soo jeediyey inay la hadasho Soomaaliya, ilaa imikana faa’iido lagama gaadhin wadahadalkaas | Dhaymoole News
	Somaliland waxa loo soo jeediyey inay la hadasho Soomaaliya, ilaa imikana faa’iido lagama gaadhin wadahadalkaas
September 9, 2017 - Written by wariye999
Wakaaladda African News oo ku Faahfaahisay Dawladnimada iyo Nabadgelyada ka Jirta Jamhuuriyadda Somaliland
Hargeysa(Dhaymoole)- Shabakadda African News ee faaqida dhacdooyinka dalalka Afrika, ayaa baahisay in Jamhuuriyadda Somaliland ay ku naaloonayso nidaam iyo kala dambayn isla markaana ay ka qabsoomeen doorashooyin macquul ahi.
Waxa kaloo warbixintan lagu xusay inay Somaliland muhiim u tahay dagaalka lagula jiro budhcad-badeedda iyo argagixisada.
Tifaftiraha Guud ee Wargeyska Dhaymoole, Cumar Maxamed Faarax, ayaa soo akhriyay warbxintaas, waxaannu ka diyaariyey warkan:-
“Somaliland waxa laga furay madxafkii u horreeyay oo loogu talogalay in lagu kaydiyo taariihda Somaliland oo madax-bannaanideeda ku dhawaaqday sannadkii 1991kii. Madxafka Saryan oo laga dhisay caasimadda Hargeysa, waxaa aasaasay Siciid Shukri Xuseen oo ka mid ahaa dagaalyahannadii u soo diriray xornimada Somaliland.
Waxa ka mid ah dhigaalka madxafkan lagu soo bandhigo taariikhdii ururkii SNM ee u soo kifaaxay madax-bannaanida Somaliland.
Ururkii SNM waxay la dirireen dawladii millatariga ahayd ee Jamhuuriyadii Soomaaliya ee uu xukumi jiray Siyaad Barre, oo dalkaas talin jiray muddadii u dhaxaysay 1969-1991 oo uu inqilaab ku qabsaday.
Afar jabhadood oo SNM ku jirtay, ayaa ku lug lahaa kacdoonkii lagu riday dawladii Siyaad Barre. Ururkii SNM wuxuu kaga dhawaaqay gobolladii waqooyi galbeed ee Soaamliya, madaxbaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
Inkastoo aan dawlad madax-bannaan loo ictiraafin Somaliland, haddana waxay samaysteen nidaam dawladeed oo sharci ah, ciidammadii amaanka iyo lacag u gaar ah. Waxa kaloo ay qabteen doorashooyin doorashooyin hufan.
Somaliland waxay ku naaloonaysaa nabadgelyo iyo horusocod dhaqaale, waxaanay muhiim u noqotay dagaalka ka dhanka ah budhcad badeedda iyo argagixisada.
Somaliland waxa loo soo jeediyey inay wadahadal la yeelato Soomaaliya, wadahadalkan oo ilaa imika faa’iido aan laga gaadhin.
Muddo 25 sannadood ah Somaliland umay suurtagelin inay galaan-gal u yeelato oo ay daymo ka hesho baanka adduunka iyo IMF (International Monetary Fund.”